Bakool: Gaadiid ganacsi oo Alshabaab laga soo celiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 2 September 2014 3 September 2014
Mareeg.com: Ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM ayaa sheegay iney Alshabaab kazoo furteen gaadiid ganacsi oo ay ku heysteen deegaan hoos yimaada degmada Waajid ee gobolka Bakool.
Gudoomiyaha degmada Waajid ee Gobolka Bakool, C/laahi Aadan Yariisow ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda Soomaaliya Alshabaab kazoo dhiciyeen gaadiid u rarnaa ganacsato Soomaaliyeed. Howlgalka ayuu sheegay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Lafaale.
C/laahi Aadan Yariisow ayaa sheegay in gaadiidka Al-shabaab laga soo furtay ay gaarayaan ugu yaraan 7-gaari oo ganacsato Soomaaliyeed u rarnaa islamarkaana Al-shabaabku ay afduub u haysteen, sida uu yiri.
Gudoomiyaha ayaa sheegay gaadiidkaas ay ku wareejinayaan ganacsatadii Soomaaliyeed ee horay looga afduubtay.
Alshabaab ayaa horay u go’doomisay degmooyinkii horay dagaalka looga saaray ee Waajid ka mid tahay, waxeyna ganacsatada u diideen iney agab geeyaan degmooyinka ay la wareegeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Jidka isku xira Ceelbuur iyo Dhuusamareeb oo la furayo